စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး ဝန်ကြီးရုံး ဖူဆ...
နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း...
ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ အချို့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ လူငယ် လူရွယ်နှင့် CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပဒေဘောင်အတ...
တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့် (၁၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ - တရုတ် လူမှု ဖွံ...
နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှ PDF အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုး အမည်...
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင့်လွင...
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည...
ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ မုံရွာ-မန္တလေး ကားလမ်းပ...
အနာဂါတ် မျိုးဆက်သစ် ရင်သွေးငယ်များ၏ ပညာရေး...
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း အကြမ်းဖက် လုပ်...
ကျောက်ဆည် တက္ကသိုလ် နှစ်(၂၀)ပြည့် ကြွေရတု...
ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ အချို့သော ကျောင်းသား၊ က...
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြ...
ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည (၈) နာရီအချိန် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့် (၃၄) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်း ဒေသဆိုင်ရာ နယ်ခြား ကော်မတီ အစည်းအဝေး ပထမနေ့ ကျင်းပ
ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ မုံရွာ-မန္တလေး ကားလမ်းပေါ်၌ PDF အမည်ခံ အကြမ်းဖက် သမားများက မိုင်းထောင်ခဲ့မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ ထိခိုက် ဒဏ်ရာများစွာ ရရှိ
အနာဂါတ် မျိုးဆက်သစ် ရင်သွေးငယ်များ၏ ပညာရေး နောက်ကျ ကျန်ရစ်မှု မဖြစ်စေရေးအတွက် အခြေခံ ပညာကျောင်းများ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားမှုကို မလိုလားသူ နိုင်ငံရေး အစွန်းရောက်များက အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုများ လုပ်ဆောင်
Jordan နိုင်ငံ Aquba ဆိပ်ကမ်းတွင် ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးခဲ့
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ပျက်စီးသွားသည့် သန္တာကျောက်တန်းများ ပြန်...
အီရန်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၅ အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက် ပြန်လည်အသက်...
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုရှိ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ခေါက်ဆွဲချ...
International Cooperation Minister receives Chinese Ambassador
Age limit extended for military cadets
Thai tradition of water buffalo racing
The world’s ugliest dog, Mr. Happy Face
Greasy pole competition in Massachusetts
preparations to host 2022 Tour de France
The new ‘Minions’ premiere in Hollywood
Bulgaria: Rose oil for perfume affected
အထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်ရမည့် ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇပြောင်း မျိုးကွဲ Omicron အကြောင်းသိကောင်းစရာ
မျှဝေအသိပေး ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ( ကလေးတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း )
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ (မြန်မာဇာတ်လမ်း...
Current Affairs June 24, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာ အဖြာဖြာ “ဘာ့ကြောင့် အဝလွန်ရောဂါ အဖြစ်များနေရတာလဲ? အဝလွန်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေက ဘာတွေလဲ?”
Current Affairs June 23, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "ရုံးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စများကို Online မှ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် ဌာနတော်တော်များမှ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေခြင်းအခြေအနေ"
Current Affairs June 17, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု အခြေအနေ"
Current Affairs June 09, 2022
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ဆန်တန်ချိန် န...
ချင်းပြည်နယ်တွင် ဝဥစိုက်ပျိုးမှုတိုးတက်စေရေးကို (၃)နှစ် စီမံချက်ရေးဆွဲပြီး ဆောင်ရွက်နေ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာရန် အရေးပါသည့်အချက်များနှင့် မီနီဘတ်ဂျက်ကာလ၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေ
သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်၏ နှစ်စဉ်ကျောင်းသားလက်ခံပေးနေမှုလိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရလဒ်များကို သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာရီရီဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း
ကျန်းမာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ် “လည်ဆစ်ရိုးကျီးပေါင်းရောဂါကို တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း”
Education June 01, 2022
ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှ ဂုဏ်အင်ကြီးမား ဆရာများ
Education May 29, 2022
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှ မျက်စိဝေဒနာရှင်(၁,၂၀၀) ကျော်ကို “ မရှိ၍မလင်းသူမရှိစေရ’’ အစီအစဉ်နဲ့အခမဲ့ခွဲစိတ် ကုသ မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ များ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမည်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဇုန် စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
မြန်မာငွေကျပ် (၃၅၆.၆၉) ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မီးရှို့ဖျက်ဆီး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါင်းတည်မြို့နယ်ရှိ တိုင်းရင်းကြက်ခြံ(၇၉)ခြံမှာ ဒေသကြက်ကောင်ရေ(၂) သိန်းနီးပါး မွေးမြူ ထားရှိ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းဖေ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းနှင့် ၎င်းလမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံနေသည့် တိုးလ်ဂိတ်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
Local News May 08, 2022
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းတွင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
Local News June 12, 2022
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့နယ်ထွက် လိုင်ချီးသီးများ ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းအားကောင်းလျက်ရှိ
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားသင့်သော ကုန်စည်များအကြောင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့် သတင်း
Local News June 06, 2022
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ (ALP) မှ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိ
ကမ္ဘောဇသာဒီရွှေနန်းတော်တွင် ရိုးရာဝတ်စုံများဝတ်ဆင်၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထား
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ ဆက်လက်ထိုးနှံလျက်ရှိ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အခြေခံကျောင်းများရှိ အသက်(၅)နှစ်မှ (၁၂)နှစ်ထိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံ
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးသွားမည်
တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိ သည် တရုတ်-ပစိဖိတ်ကျွန်းစု နိုင်ငံများထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် ဖီဂျီနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
World News May 30, 2022
အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာထားသည့် CRPH၊ NUG နှင့် ယင်းတို့၏ လက်ဝေခံများ၏ လှုံ့ဆော်၊ ဝါဒဖြန့်ခြင်းများ လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သူများကို ဖော်ထုတ်အရေးယူ
Travelogue March 15, 2022
Mandalay 14° 29°
Yangon 21° 32°
Mon 21° 34°
Kayah 17° 30°
Bago 19° 31°
Sagaing 13° 26°
Tanintharyi 22° 33°
Kachin 12° 24°
Kayin 21° 33°
Chin 8° 23°
Rakhine 17° 28°
Shan 13° 24°
Ayeyarwady 20° 32°
Nay Pyi Taw 17° 32°
Magwe 15° 31°
တောင်းဆု တေးရေး _ ဂျက်မြသောင်း တေးဆို _ ရေဂျီးနား
ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ချင် တေးရေး _ စောအယ်ဇ တေးဆို _ မြန်မာပြည်သိန်းတန်
အချိန်မလွန်ခင် တေးရေး _ နေကိုလတ် တေးဆို _ ဈာန်
ဂီတနေ့ တေးရေး _ ဂီတစာဆိုကိုလွင်မြင့် တေးဆို _ မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးဝင်များ
ညချမ်းသဘင် တေးရေး _ အလင်္ကာကျော်စွာ မြို့မငြိမ်း တေးဆို _ အိအိချွန်
ဂီတရေစီးကြောင်း တေးရေး _ စန္ဒရားလှထွတ် တေးဆို _ ချိုမီမီဇော် ၊ သီတာသိမ့်
ကိုကိုရေ တေးရေး _ ဂါဇာ တေးဆို _ သွန်းနေနေ